Ndeipi midziyo yekombuta yakanakira counter strike ► Counter Strike 1.6 Download
Ndeipi midziyo yekombuta yakanakira counter strike
February 16, 2022	Off	By romas
Wadiwa CS: GO uye counter strike 1.6 gamer, kana iwe uchida kuve akanakisa counter strike mutambi, ipapo iwe unoda midziyo yakakodzera yayo.
Chekutanga chaunoda igonzo rakanaka rekutamba rinotsigirwa naro counter strike mutambo, muenzaniso watakakusarudzira:
Chinhu chinotevera chauchazoda yakanaka yekutamba mbeva pad, aya mbeva pad counter-strike vatambi isarudzo yakanaka:
Zvakare, iwe unozofanirwa kutenga kune yakanakisa CS mutambo chiitiko musoro wefoni! Izvi zvinodiwa kune wese counter strike mutambi hunhu. Nemusoro wakanaka “unozonzwa muvengi asati atomboziva kuti uripo. Nekushandisa ruzha unogona kukunda muvengi. Rangarira "Kuziva ihafu yehondo". Sarudzo yakanakisa ye counter-strike vatambi mahedhifoni ndiko:
Chinotevera chatinoda ikhibhodi. Kiibhodhi hombe haina kudiwa zvakanyanya, asi kuve nekhibhodi yakanaka kunoita kuti unzwe wakasununguka zvakanyanya. Kune yega yega CS: GO uye counter strike 1.6 vatambi ndeyekuti kiyibhodhi ndiyo yakanakisa sarudzo:
Mamwe mazano ekuwedzera emutambo kubva https://csdownload.net timu kwauri mudiwa CS mutambi:
Kutanga kumusoro, Pistols - usapfure nekukurumidza sezvaunokwanisa. Pfura zvishoma nezvishoma uye mushure memabara mashoma. Nenzira iyoyo unenge uine mukana uri nani wekuuraya muvengi wako. Nekuti Paunopfura nepfuti nekukasira, mabara ese haaendi mumuvengi, asi kumwe kuburikidza nemuvengi.
Tevere kumusoro, Iyo AK-47 neM4A1 - yakanakisa sarudzo yekuuraya CS muvengi ndeye Kupfura mupikisi mushure memabara mashoma kana iwe uri kure naye. Kana uri padyo, pfura chinangwa chakadzikira zvishoma pane chiri pasi, uye pfurawo mabara ese nekudzvanya bhatani rembeva.
Kufamba - Hongu, kana uchifamba nevaunoshanda navo, usafambe kumashure kwavo. Kana ukasangana nemuvengi, pane mukana mukuru wekuti” achakupfurai mose.
Yeuka, kuziva zvakawanda kupfuura muvengi wako, iwe uchagara uine zano rakanaka pamusoro pake. Mukuwedzera, iwe unozokwanisa kuona kunakidzwa kwese kweiyi inoshamisa CS: GO kana counter strike 1.6 mutambo.
chikamuCounter Strike mazano uye zvidzidzo
Tagsyakanakisa yekutamba pad counter strike yakanakisa yekutamba pad cs 1.6 yakanakisa headphone ye counter strike best headset for counter strike yakanakisa headset ye cs yakanakisa kiibhodhi ye counter strike yakanakisa kiibhodhi ye cs best mouse for counter strike 1.6 yakanakisa mbeva ye cs counter strike 1.6 download counter strike yakanakisa komputa michina cs 1.6 download cs komputa michina mamwe mazano counter strike mamwe mazano cs 1.6 nzira counter strike 1.6 mazano csgo mazano cs 1.6
Counter Strike 1.6 gameplay ngatizive zvakawanda nezvazvo
budiriro Counter-Strike 1.6